Manchester United oo doonaysa inay Kooxda Paris Saint-Germain ku garaacdo saxiixa Ousmane Dembele – Gool FM
Manchester United oo doonaysa inay Kooxda Paris Saint-Germain ku garaacdo saxiixa Ousmane Dembele
Haaruun January 31, 2022
(Manchester) 31 Jan 2022. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay diyaar u tahay inay xilli dambe dalab ka gudbiso xiddiga garabka uga ciyaara naadiga Barcelona ee Ousmane Dembele.
Iyadoo kooxda reer Catalan ay ku wargelisay inuu xor u yahay inuu ka tago garoonka Camp Nou ka hor dhammaadka bisha Janaayo ee maanta ku eg, waxaa la sheegay in Dembele uu qarka u saaran yahay inuu ku biiro Kooxda Paris Saint-Germain.
Yeelkeede, xiisaha kaga imaanaya horyaalka Premier League waligood ma noqon kuwo gabaabsi ah, eedeymaha naxdinta leh ee ku saabsan Mason Greenwood ee soo baxay Axaddii oo ahayd inuu ku hadgudbay jirdilna u geystay saaxiibtiis ayaa laga yaabaa inay ku qasbaan Man United inay kaga jawaabto suuqa kala iibsiga oo ay soo qaataan Dembele.
Sida uu warinayo Warsidaha Foot Mercato, Man United ayaa isku dayi karta in ay Dembele keento oo ay ka dhigto bedelka tooska ah ee Greenwood ka hor Isniinta maanta oo uu xirmayo suuqa kala iibsiga.
Inkastoo warbixintu ay intaas ku dartay inay adag tahay in PSG laga saaro heerkan oo kale oo looga guuleysto saxiixa xiddigan, haddana waxaa la warinayaa in xiriir la la sameeyey Wakiilka xiddigan reer France.
24-sano jirkaan ayaa qandaraaskiisa haatan waxaa ka harsan kaliya shan bilood, taasoo ka dhigaysa maanta oo suuqa ugu dambeysa ay Barcelona dib u soo ceshato qiimaha mid ka mid ah lacagaha ugu badan ee suuqa kala iibsiga kaga baxay taariikhdooda.
Kooxda Arsenal oo isku daygii ugu dambeeyey ku doonaysa Weeraryahanka ka tirsan Juventus ee Alvaro Morata
Donny van de Beek oo ka tagaya Manchester United & Koox ka dheesha horyaalka Premier League uu tijaabada caafimaad u maray maanta